Vola voajanahary voajanahary voajanahary namboarina China Manufacturer
Description:Plant Starter Heat Mat,Plastics Heat Mat,Plant Seed Heat Mat
Home > Products > Seeding Heater System > Seeding Heat Mat > Vola voajanahary voajanahary voajanahary namboarina
Model No.: XHC-FO37
Ny voa Manomboka ny hafanana hafanana ho an'ny mpiompy, ny mpirotsaka ary ny ankizy koa. Manatsara ny fiterahana izy ireo amin'ny fampiroboroboana ny faritra fotsy kokoa noho ny haavon'ny hafanana. Amin'ny fanamafisana ny fakany, dia mampitombo ny fahombiazanao mitombo ianao!
Ny hafanana ety ambany dia iray amin'ireo fomba manan-danja sy mahomby amin'ny fanatsarana ny fikajiana sy ny fambolena. Ny fitaovana fampiasan'ny hafanana dia novolavolaina mba hahazoana tsaratsara kokoa sy maharitra! Ny fantsom-piveloana vaovao, matanjaka kokoa sy ny haavon-tsakitera matanjaka kokoa dia manome fanamafisam-po bebe kokoa sy ny faharetana hiatrehana ny tontolo iainana mikitoantoana.
fanamafisam-peo fanamafisam-peo 200 * 450mm
Shenzhen Xinghongchang Electric Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 1996, dia mpanamboatra fanafody matihanina ao Huizhou. Nandritra ny 20 taona niainana tamin'ny famolavolana singa fanamafisana, dia nitarika ny famolavolana sarimihetsika ho an'ny biby fiompy sy ny hafanana isika, ary nitarika loharanom-pivoaran'ny angovo fanavaozana.
Plant Starter Heat Mat Plastics Heat Mat Plant Seed Heat Mat Seamed Starter Heat Mat Plant Heat Mat PTC Seed Starter Heat Mats PTC Seedling Start Heat Mat Plant Seeding Heating Mat